Marcelo Oo Fariin Dhiirigelin Ah U Diray Neymar Kadib Dhaawacii Sababay In Qaliin Lagu Sameeyo %
Daafaca dambeedka bidix uga dheela Real Madrid, ee Marcelo, ayaa wuxuu sheegay inuu dareemayo waxa uu hada dareemayo Neymar, kadib markii dhaawac mudada uu garoomada uga maqnaanayo uu soo gaaray.
Daafacaan reer Brazil, ayaa wuxuu dhawaan kasoo laabtay dhaawac, isagoona shaki badan laga gelinayay in uusan dheeli doonin ciyaarta Habeen dambe ee Champions League, laakiin diyaar ayuu uyahay midaas.
“Marka ay kugu dhacdo nasiib daro [dhaawacaan oo kale] waxaad arkeysaa waxyaabo kala duwan, waxaana isweydiineysaa wax walba,” ayuu ku sheegay Marcelo, wareysi uu siiyay Segue ama Baile.
“Waxaa kusoo baxay Filimaan badan, waxaana galeysaa waqtiyo kala duwan, oo ay ugu horeyso caajis badan, waxaadna bilaabeysaa inaad wax badan isla sheekeysato, taasoo dhibaato badan ah,” ayuu hadalkiisa raaciyay.
“Neymar, waa uu ogyahay isaga inuu yahay mid ay ku tashanayaa xulka Brazil, dadka Brazil ay sugayaa isaga, waxaana ognahay inuu dib noogu soo laaban doono,” ayuu hadalkiisa kusii daray.
“Waa xaalad adag, laakiin dhamaanteena waxaan udireynaa tamaro wanaagsan, waana hubaa inuu soo noqon doono isagoo ah mid xoogan, waxaan sidoo kale u diri doonaa farriin dhiiri gelin ah,” ayuu kusoo gaba gabeeyo Marcelo.
BrazilMarceloNeymarPSG vs Real Madrid
Inuu Guusha Jecelyahay, Halista Di Maria & Shirka Jaraa’id Ee Ramos Ka Hor Kulanka PSG Ee CL